Manchester City oo Gurigeeda ku garaacday Chelsea +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Manchester City oo Gurigeeda ku garaacday Chelsea +SAWIRRO
Kooxda kubada Cagta Cagta Chelsea ayaa Gurigeeda lagu Garaacay ladib kulankii Xiisaha lahaa ee ay Marti geliyeen Naadiga Manchester City waxaana looga badiyey 1-0.
Goolka Guusha ee Kooxda Manchester City waxaa dhaliyey Cayaaryahankii hore ee Chelsea Kevin De Bruyne kaas oo Goolka dhaliyey daqiiqadii 67 aad ee qaybta labaad ee Cayaarta.
Pep Guardiola kooxdiisa Man City ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka Ingiriiska kadib markii 1-0 ay guusha kaga soo qaateen Chelsea kulan ka dhacay garoonka Stamford Bridge.
Fadlan hoos kaga bogo xaqiiqooyinka ugu waa weyn ee kulankaan laga diiwaan galiyay:
Xaqiiqada 1-aad: Kevin De Bruyne ayaa goolkiisa ugu horeeyay ka dhaliyay kooxdiisii hore Chelsea asigoo horey 6-kulan kaga hor imaaday.
Xaqiiqada 2-aad: Chelsea xili cayaareedkii hore oo dhan marka ay horyaalka qaadayeen kaliya labo kulan ayaa garoonkooda looga badiyay laakiin haatan xili cayaareedkan weli bilaawga ah labo guul daro ayay Stamford Bridge kula kulmeen!
Xaqiiqada 3-aad: Man City ayaa hada guuleesatay 4-kulan oo isku xigto EPL ayadoo aan wax gool ah laga dhalinin waxayna dhaliyeen 17-gool!
Xaqiiqada 4-aad: Chelsea ayaa ku guul dareesatay markii ugu horeesay tan iyo November 2012 inay labo kulan oo isku xigto EPL garoonkooda goolal ku dhalin waayaan waxayna labadii kulan ee ugu dambeesay goolal ka dhalin waayeen Arsenal 0-0 iyo Man City 0-1.
Xaqiiqada 5-aad: Eden Hazard ayaa ku guul dareestay inuu hal fursad abuuro kulankaan ka hor inta aan la badalin qaybta labaad.
Xaqiiqada 6-aad: Kevin De Bruyne Man City wuxuu dhaliyay 14-gool EPL tan iyo markii uu kooxdan kusoo biiray waxaana xusid mudan in 7-ka mid ah goolashaas uu banaanka ka dhaliyay ama xerada ganaaxa banaankeeda.
Xaqiiqada 7-aad: Gabriel Jesus ayaa hada ku lug yeeshay 16-gool asigoo 16-kulan EPL Man City u cayaaray wuxuu dhaliyay 11-gool sidoo kalena 5-kubad ayuu caawiyay oo midkii ugu dambeeyay saaxiibkiis Kevin De Bruyne dhalinaayay ku lug lahaa.
Xaqiiqada 8-aad: Pep Guardiola ayaa markii ugu horeesay kulan 90-daqiiqo kooxda Chelsea ka badiyay waxayna ku qaadatay kulankiisii 8-aad inuu Blues guul ka helo.
Xaqiiqada 9-aad: Chelsea kaliya 4-aad ayay Man City ku rideen, waana laadadkii ugu yaraa ee Blues hal kulan EPL rido ayadoo garoonkeeda ku cayaareyso tan iyo Janaayo 2015 markaas oo ay Man City kula cayaareen Stamford Bridge.